by.U အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（32.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် by.U - The All-Digital Provider
by by by.u သည်အလွန်အမင်းမိုဘိုင်းအစီအစဉ်နှင့်အံ့သြစရာစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများရှိရန်ဖြစ်သည်ကိုသိပါ။ မင်းမင်းဟောင်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီး by.u ကိုပြောင်းရွှေ့သင့်တဲ့အကြောင်းရင်း4ချက်ပါ။
အချိန်နှင့်တည်နေရာအခြေပြုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမရှိပါ။ အချိန်, တည်နေရာနှင့်အမြန်နှုန်းကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲစိုးရိမ်ပူပန်မှုကင်းသောခွဲတမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော app များပေါ်တွင်တိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ Ge Geet, "Yang Bikin Nagih" သည်ယခုအခါ RP 50,000 သာ RP 50,000 အတွက် 10 GB ဒေတာခွဲတမ်း။
2 ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်တတ်နိုင်သော topping ခွဲတမ်း
သင်ဂီတကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါသလား။ ဂီတခွဲတမ်းကိုဝယ်ပါ။ မင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကြိုက်လား ရုပ်ရှင်ခွဲတမ်းကိုဝယ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်မနှစ်သက်သောအရာတစ်ခုခုကိုမဝယ်ပါနှင့်။ Topping Quota RP 5000 မှစတင်သည်။ မင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ။
3 ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ကိုရွေးချယ်ပြီး0န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုအက်ပ်များထဲမှ0န်ဆောင်မှုပေးပါ။
သင်၏ SIM ကဒ်ကိုအက်ပ်များမှတဆင့်အမှာစာယူပါ။ သင်၏ SIM ကဒ်ကိုရယူရန်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။ Pick-up သို့မဟုတ်ပေးပို့? ဒါဟာအားလုံးသင့်အတွက်ပါပဲ။ Java Island လိပ်စာနှင့် Flat Rate Rp 10.000 သို့ JNE ကို သုံး. JNEATION ကို အသုံးပြု. အခမဲ့ဖြန့်ဝေပါ။
ကိုရွှေ့ပါ။ ယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ ..u :)
ဘာအသစ်လဲ by.U - The All-Digital Provider 754
Sebelum Anda Membeli Kartu Provider By.u , Jangan Dulu Beneran !
REVIEW BY.U KARTU DIGITAL PERTAMA DI INDONESIA DARI A - Z | UNBOXING KARTU DAN CARA PILIH KUOTA
RAJA ~ Review Apa Aja